ကိုဗစ်‌ရှေ့တန်းမှာ နှာခေါင်းစည်းအတုတွေ တပ်နေရတဲ့ ကိစ္စကို ဆရာဝန်တဦး ဒဲ့ပြောပြီ - Zet Star
ကိုဗစ်‌ရှေ့တန်းမှာ နှာခေါင်းစည်းအတုတွေ တပ်နေရတဲ့ ကိစ္စကို ဆရာဝန်တဦး ဒဲ့ပြောပြီ
N95 1860 အတုတွေ ဘယ်လိုရှေ့တန်း ရောက်လာလဲ ဆိုတာ..ပြောမယ်…
N95 က အရင်က FDA က ကြပ်မတ်ထဲမှာ ပါတယ်. အဲ့ကနေမှ အခု ကိုဗစ် ကာလမှာ…လိုအပ်ချက်အရ ချွင်းချက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်. အဲ့မှာ မတော်လောဘ သမားတွေ လုပ်စားကြတော့တာပဲ စျေးကွက်ထဲ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်လာတယ်… အလှူရှင်တွေက…..မိမိအဆင်ပြေရာ လက်လှမ်းမှီရာ… ဝယ်လှူကြတယ်…. အဲ့ကနေ….အများဆုံး……ရှေ့တန်းကို ရောက်တယ်… (စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ အလှူရှင်များ ခမျာ…..ကျနော်အဖြစ်မှန်ပြောပြတာပါ….လူကြီးမင်းတို့ အ​ြပစ်လုံးဝမရှိပါ)
အခု ကျနော့်သူငယ်ချင်း… ICU ဂျူတီ ဆင်းနေတာ.. သူ့ဆီက Mask က…အတု.. သူ ဂျူတီ ဆင်းနေတာ….ICU နော်… အသည်းအသန်လူနာတွေ… အသက်ရှုစက် တင်ပေးနေရတာ…. သူ့ဆီမှာ ရောက်နေတာ ခများတို့ သွင်းလာတဲ့အတု… ခများတို့ အဲ့အတုတွေ သွင်း…လိုက်… ရောင်းလိုက် လုပ်တဲ့ငွေ ကနေ.. တစ်နေ့ထမင်း ဘယ်နှစ်ထပ်ပိုစားရလဲ.. သုံးနပ်အပြင်….ပိုစားရလို့လား..
အဲ့ Mask အတုတွေကြောင့်… ပေးလိုက်ရတဲ့ အသက်တွေ…. စတေးလိုက်ရတဲ့…..ဆရာဝန်တွေ သူနာပြုတွေ….. ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေ…. သူတို့ရဲ့ လုပ်အားတွေ. လုပ်အားချို့တဲ့လို့…ထိခိုက်သွားရတဲ့… အသက်တွေ.. များလိူက်တဲ့ အကုသိုလ်ဗျာ…
ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းက ကူးစက်နိုင်ချေများပါတယ်.. ဒါပေမယ့် Mask အစစ် ရရင်တော့….ကူးစက်တာနည်းမှာပေါ့ဗျာ….အတုကြီးဝတ်တော့ ပိုကူးမှာပေါ့…. အချို့က ကျနော်တို့ အတုအစစ် ခွဲတာ…မတင်တော့… တိုက်ခိုက်ကြတယ်..ပြောကြတယ်…. ကျနော်တို့ မပြောတာ အကြောင်းရှိတယ်… အဲ့အချက်တွေ ပြောလိုက်ရင်…..အတုလုပ်တဲ့သူတွေက အဲ့တာတွေ လိုက်ပြင်လိမ့်မယ်… ပိုပြီး အန္တရယ်များတာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယိ… အဲ့တာကြောင့် မီဒီယာကြီး တစ်ခု အင်တာဗျူးကိုလည်း.. ကျနော်တို့ ငြင်းတယ်..
ကျနော်တို့ အဲ့ အတုအစစ် ခွဲတဲ့.. အချက်အလက်တွေကို…. ပြောတယ်.. ဘယ်နေရာကိုပြောလဲ…ဆိုတော့.. သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ ကိုပြောတယ်…. သူတို့နဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖလှယ်တယ်.. အလုပ်တွဲလုပ်တယ်.. ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်က ရှင်းရှင်းလေး… ရှေ့တန်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကျနော်တို့… သူငယ်ချင်းတွေ လက်ထဲ…. အရမ်းအန္တရာယ်များတဲ့…..အဲ့အတုတွေ… မရောက်စေရေး..ပဲ..
လူကြီးတွေလည်း…မနားမနေ…အလုပ်လုပ်နေတယ်…. သူတို့လည်း ဒီကိစ္စ ကိုသိတယ်… လုပ်နေတယ်.. ဘယ်သူရောင်းတာ အတု ဘယ်သူရောင်းတာ အစစ် ကျနော်တို့ မခွဲပေးဘူး…. ကျနော်တို့အလုပ်လည်း မဟုတ်ဘူး… စိတ်လည်း မဝင်စားဘူး..
ရှေ့တန်းက တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ဆရာကြီးတွေ.. ခွဲခိုင်းတဲ့ဟာတွေ ခွဲပေးတယ်.. အတုဆိုရင် Faceshield ခံသုံးခိုင်းတယ်.. ကျနော်တို့ နိုင်သလောက် လိုက်ဆယ်မယ်… ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်ဒါပဲ…. ရှေ့တန်းက ဆရာတို့….ခမျာ… အတုတွေ အရမ်းများလာတဲ့အတွက်… Faceshield လေး ခံသုံးကြပါ ခမျာ.
← ဦးသန်းရွှေက ဒုသမ္မတလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုတာကို အပြတ်ငြင်းပစ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်
လေးစားအားကျဖွယ် ရှားမှ ရှားတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦး (ကိုဗစ်ကာလမှာ ဒီလိုလူမျိုး များများ လိုပါတယ်) →